Netizen Report: Mpanao Hetsi-panoherana Manary SIM Any An-kabone sy Mandoro Modems Nandritra Ny Fanaovana Ankivy Ny Fifandraisandavitra Saodiana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 03 Novambra 2016 6:28 GMT
Ny 01 Otkobra teo, rehefa natombok'ireo Arabo Saodiana ny fanaovana ankivy ireo mpanome tolotra finday, nomanin-dry zareo haharitra andro iray ilay izy. Kanefa iray volana aty aoriana, mbola eo ihany ilay izy. Ampiharan'ireo mpanao hetsi-panoherana tsindry ireo Orinasam-pifandraisandavitra Saodiana, orinasa eo ambany fiahian'ny fanjakana, mba hampidina ny tahan'ny tolotra sy hanosika ireo fandraràna ny tolotra voafantina omen'ny Viber, WhatsApp, Facebook Messenger, Telegram sy Skype. Lavin'ireo mpihetsiketsika ny hampiasa tambajotra finday, natsahany ny fandefasana hafatra an-tsoratra ary nosorohany ny hanampy fahana amin'ny fandefasana angon-drakitra fampiasany.
Raha misy isaina amin'ny rantsan-tànana ireo milaza fa miankina tanteraka amin'ny fifandraisana haingam-pikoriana mba ho fifandraisany, ireo loharanon'ny Global Voices avy ao anatin'ilay firenena kosa milaza fa ny ankamaroan'ny olona tafiditra amin'izany dia nihisaka nankany amin'ireommadinika mpanome tolotra, ahitàna ny Mobily sy ilay Koetiana telco Zain mpifaninana ao an-toerana. Nahazo aina tsy azo tsinontsinoavina tao amin'ny Twitter ilay fanentanana, teo ambanin'ny tenifototra #wearegoingtobankruptyou (hataonay mangorona entana ianareo – amin'ny teny Arabo:#اليوم_32_راح_نفلسكم) ary tao amin'ny YouTube, izay marobe ireo mpanohana no nandefa lahatsary ahitàna olona mamotika modems (ny sasany misy ny fangon'ny Telecom Saodiana hita mazava tsara) ary manondraka rano any an-kabone ny karatra SIM.
Ny loharano avy ao an-toerana ho an'ny Al Alam news nilaza tao anaty lahatsoratra nivoaka ny 3 Oktobra hoe hatramin'io andro io dia very teo amin'ny 23 tapitrisa rials ilay orinasa. Fadal Bou Al-Ainain, mpahay toekarena nitafàn'ny Arab News, tamin'iny herinadro lasa iny, milaza fa ny mety very hatrany amin'ny 50 tapitrisa rials ny Telecom Saodiana (maherin'ny 13 tapitrisa dolara amerikana any ho any) raha toa ka mitohy ilay fanaovana ankivy mandra-pifaran'ny volana.
Anatin'ireo vaovao hafa avy any Arabia Saodita, nosamborin'ny manampahefana mpampihatra lalàna i Mamdouh Alshammari, mpikatroka ara-tsosialy, fantatra ihany koa amin'ny hoe Al Monsadah, noho ny filazana azy ho namoaka lahatsary saropady tao amin'ny Snapchat, araka ny Tambajotra Arabo mpanome vaovao momba ny Zon'Olombelona. Taterin'ny ANHRI fa natomboky ny manampahefana Saodiana misahana ny fiarovana ny hetsika fisamborana ireo mpanakiana any media sosialy tato anatin'ny andro maro lasa, isan'izany ny nisamborana ilay tanora iray sy ilay mpikatroka Aboud Bad. Efa azo heverina ny hananganan-dry zareo fiampangàna an'i Al Monsadah ho “nanohintohina filaminam-bahoaka, ny soatoavina ara-pinoana na ny fitondrantena anaty fiarahamonina, na fiampangàna sandoka hafa.”
Tandindonin'ny fibahanana ao Rosia ny LinkedIn, ilay tambajotra midadasika indrindra erantany ivondronan'ireo matianina ety anaty aterineto. Ireo mpanivana federaly no nandresy lahatra ireo fitsaràna ao Maosko hilaza ilay tambajotra ho tsy ara-dalàna. Hitan'ny mpitsara iray fa amin'ny fomba tsy araka ny lalàna no izaràna'ny LinkedIn torohay manokana tsy an'ny mpampiasa azy no sady tsy nahazoany alàlana. Namoaka didy ihany koa ilay fitsarana hoe manangona ny mombamomba ny tena manokana avy amin'ireo mpampiasa azy ao Rosia nefa tsy mitahiry azy ireny aminà lohamilina mipetraka ao Rosia ny LinkedIn — fitakiana araka ny lalàna nampidirina tamin'ny taona lasa izay vitsy amin'ireo orinasa vahiny mpanome aterineto no manaja azy.
Vinavinain'ilay lohamilina Rosiana fitadiavana, Yandex, ny hanaisotra ny fanasongadinana lahatsoratra avy amin'ireo mpilaza vaovao izay tsy voasoratra ao anaty rejisitry ny governemanta Rosiana mba tsy ho ao anatn'ny lisitra nataony ho an'ireo “vaovao misongadina indrindra”. Voatery tsy maintsy niditra amin'io fiovàna io ny Yandex mba hifanaraka amin'ilay lalàna tamin'ny Jona 2016 mifehy ny mpanangona vaovao ety anaty aterineto iarahany amin'ireo mpanjohy efa maherin'ny 1 tapitrisa isanandro. Eritreretina hiditra hanan-kery manomboka ny -Janoary 2017 ireo fiovàna ireo.
Tsy noeritreretina ny hanaisoran'ny manampahefana Maraokàna ny fandraràna ireo fampiasa VoIPs nahatonga ireo mpampiasa marobe tsy ho afaka nampiasa ireo fitaovana fiantsoana amin'ny feo, toy ny WhatsApp sy Skype hatramin'ny Janoary 2016. Hatramin'ny 24 Oktobra, azon'ireo Maraokàna mpampiasa natao ny niditra tamin'ireny sy ireo fampiasa hafa tsy voatery handalo VPNs na fitaovana hafa fihodivirana. Ahian'ireo Maraokàna ho vonjimaika ihany ilay fiovàna, ary ho fiomanana amin'ny fandraisana ny Vovonamben'ny Firenena Mikambana Hiresahana ny Fiovan'ny Toetrandro (COP22) hatao ao an-tanànan'i Marrakesh eo anelanelan'ny 7 sy 18 Novambra.
Tatitra iray an'ny polisy niporitsaka tamin'ny herinandro lasa avy ao amin'ny faritany Xinjiang ao Shina no mamaritra ireo fitaovana fihodivirana ny sivana anaty aterineto ho tafiditra ao anatin'ny sokajy iray manokana: “rindrambaiko mahery setra sy mpampihorohoro kilasy faharoa.” Tsy faritan'ilay tatitra ny tena heloka bevava tena misy; ny mifanohitra amin'izay, saininy mialoha hoe mety hisy heloka bevava hitranga satria niezaka niditra hijery votoaty taminà tranonkala voasivana ilay noahiahiana, tamin'ny fampiasàny fitaovana fihodivirana. Tsy misy torohay ho an'ny daholobe mamaritra ny fomba sy ny antony nanasokajiana ireo teknolojia sasantsasany ho tahaka izany, na ny hoe fitaovana hafa toy inona avy no mbola voasokajy tahaka io. Ho an'ireo mpampasa ao Shina — toerana izay mahazatra ny rehetra ny mampiasa ny VPNs any amin'ireo tanàndehibe sy any amin'ireo orinasa tsy miankina — ilay poritsaka dia nitarika fanontaniana goavana momba ny resaka maha-ara-dalàna ireo fitaovana fihodivirana amin'izao fotoana izao sy amin'ny hoavy.
Nampiditra moramora andalana iray ho ao anatin'ny politikany momba ny fiainana manokana ny Google, tamin'ny fampanantenana fa tsy hanafangaro ny angon-drakitra nangoniny amin'ny hetsika fijerena ny torohay manokana azo fantarina ety anaty tranonkala momba ireo mpampiasa. Ny vokatr'io fiovàna io araka ny tatitra vaovao avy amin'ny ProPublica, dia afaka afangaro amin'izay rehetra torohay manokana omenao ny Google ankehitriny ireo angondrakitra marobe nangoniny avy amin'ny hetsikao mitety ny tranonkala, nangoniny tamin'ny alàlan'ireo cookies DoubleClick – izay mitsikilo ireo fipotsirana rehetra ataonao, tsy ao amin'ireo tranonkala Google irery ihany, fa na aiza na aiza ao anaty tranonkala ao – mba hametrahana kaonty gmail ho an'ny mpampiasa iray, na ireo vokatra hafa avy aminy.
Mba hahafahana mivoaka amin'ilay rafitra fitsongoana dia, midira ao amin'ny pejy Google My Account, potsiro ny “fanarahamaso ny zavatra atao” ary esory ny marika manandrify ny “ampiaraho amin'ny tahirin'ny fitety Chrome sy ny hetsika avy amin'ireo tranonkala sy fampiasa izay mampiasa ny tolotra Google.”
Samy nandray anjara tamin'ity tatitra ity i Afef Abrougui, Ellery Roberts Biddle, Weiping Li ary Sarah Myers West